Ny any Amerika Avaratra Sabreliner (Rockwell Sabreliner tatỳ aoriana) dia fandraharahana fiaramanidina fiaramanidina mandroso ny any Amerika Avaratra Aviation. Nisy nanolo-kevitra ny amin'ny US Air Force ho valin'ny fanandramana amin'ny Mpanazatra Utility fandaharana (UTX). Ny miaramila dika, antsoina hoe T-39 Sabreliner no ampiasain'ny na ny US Air Force ny US Navy. Sivily dikan 'ny fitaovana ihany koa novolavolaina. Tsy nahatonga ny anaram-bositra "Sabreliner" ny zava-misy fa dia mitovy elatra toy ny F-86 Sabre.
Downloads 7 661
Nohavaozina taminy 04-08-2012